Tirada dadka ku dhintay daadadka Jarmalka iyo Belguim ayaa gaaraya 170 qof | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Tirada dadka ku dhintay daadadka Jarmalka iyo Belguim ayaa gaaraya 170 qof
Tirada dadka ku dhintay daadadka Jarmalka iyo Belguim ayaa gaaraya 170 qof
Tirada dadka ku dhintay daadad ba’an oo ka dhacay galbeedka Jarmalka iyo Belguim ayaa sare u kacday oo gaartay ugu yaraan 170 ruux kadib markii daadad ka dhashay roobab iyo wabiyo fatahay ay ku dhufteen magaalooyin ay dadweyne faro badan degenaayeen.
Qiyaastii 143 qof ayaa ku dhimatay daadadkii ka dhacay masiibadii dabiiciga ahayd ee ugu xumeyd Jarmalka in kabadan nus qarni.
Boqolaal dad ah ayaa wali la la’ayahay ama la gaari waayey maadaama dhowr meelood aan la geli karin sababo la xiriira heerarka biyaha oo aad u sareeya halka isgaarsiinta meelaha qaar ay wali go’antahay.
Madaxweynaha Jarmalka Frank-Walter Steinmeier ayaa booqday Erftstadt oo ka tirsan gobolka North Rhine-Westphalia, halkaas oo musiibada ay ku dhinteen ugu yaraan 45 qof.
Qiyaastii 700 oo qof oo deggenaa ayaa laga daad gureeyay galinkii dambe ee Jimcihii ka dib markii uu biyo xireen ka dilaacay magaalada Wassenberg oo u dhow Cologne, sida ay masuuliyiintu sheegeen.
Steinmeier ayaa sheegay in ay qaadaneyso todobaadyo sidii lagu ogaan lahaa heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha lagana yaabo in balaayin yuro ay ku bixi karto dib u dhiska.
Armin Laschet, oo ah raiisul wasaaraha gobolka North Rhine-Westphalia ahna musharaxa xisbiga talada haya ee CDU ayaa sheegay inuu maalmaha soo socda kala hadli doono wasiirka maaliyada Olaf Scholz si loo helo taageerada dhaqaale.
Chancellor Angela Merkel ayaa la filayaa inay u safarto maalinta maanta “Axad” magaalada Rhineland Palatinate, oo ah gobolka ay ka tirsan tahay tuulada ku burburtay daadadka ee Schuld.
Wadanka Beljamka, tirada dhimashadu waxay gaartay 27, sida laga soo xigtay xarunta dhibaatooyinka qaran, oo isku dubaridaysa howlaha gargaarka ee halkaas ka socda.
Waxay intaas dheer in 103 qof la la’yahay oo la gaari waayay meelaha ay ku sugan yihiin.
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay daadadka, oo inta badan ku dhuftay gobollada Jarmalka ee Rhineland Palatinate iyo North Rhine-Westphalia iyo bariga Belgium, ayaa ka jaray dhammaan bulshada korontadii iyo isgaarsiintii.
Heerarka biyaha daadadka ayaa si tartiib tartiib ah ugu dhacay qaybaha ugu daran ee Biljimka, taas oo u oggolaanaysa dadka deegaanka inay kala soocaan hantidooda waxyeellada gaadhay. Raiisel wasaare Alexander De Croo iyo Madaxweynaha Gudiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa booqday meelaha qaar galabnimadii Sabtida.
Previous articleXildhibaan Cabdirisaaq: ”Ragga muddo xileedkoodu dhamaaday, dalka Meel xun ayay dhigeen”.
Next articleGuddiga loo xilsaaray Arrinta Gobolka Gedo oo soo gabagabeeyay howlihii ay kawadeen Garbahaarey.